माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि केपी ओली !
ARCHIVE, POLITICS » माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि केपी ओली !
काठमाडौँ – हाल चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकताको निर्णय गरेका एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति सबैको नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुने भएका छन् ।
तीन पार्टीबीच एकताअघि हुने बैठक र छलफलको अध्यक्षता र संयोजन ओलीले गर्ने सहमति भएको एक नेताले बताए । बुधबार एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम निवासमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको अध्यक्षता पनि ओलीले नै गरेका थिए ।
‘पार्टी एकताअघि बैठकको अध्यक्षता र सयोजन केपी कमरेडले गर्ने कुरा भएको छ’, एक एमाले नेताले भने । तीन दलले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी चुनावी तालमेलको घोषणा गरेका थिए । - काठमाडौँ टुडे